ဒီတပတ် English American Style Idioms ကဏ္ဍမှာ မျက်မှောက်သတင်းလောကမှာ သုံးနှုန်းနေတဲ့ အီဒီယံအသုံးတချို့ဖြစ်တဲ့ Buy in, Mum’s the word, To takealeaf out of someone’s book တို့ကို တင်ပြထား ပါတယ်။
(၁) Buy in
Buy (၀ယ်တာ)၊ in (အထဲ ) ဖြစ်ပြီး စကားစုတခုလုံးရဲ့  လုံးကောက်အဓိပ္ပါယ်က အထဲမှာဝယ်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအသုံးရဲ့ Idiom သွယ်ဝိုက်အဓိပ္ပါယ်ကနှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ ပထမက လူတဦးရဲ့အယူအဆ အတွေးအခေါ် စဖြင့်နဲ့ပတ်သက်လို့ ထောက်ခံအားပေးတာ၊ လက်ခံသဘောတူတာကိုဆိုလိုပါတယ်။ နောက်တမျိုးက ငွေရေးကြေးရေးနဲ့ပတ်သက်လို့် ပါဝင်ရင်းနှီးထည့်ဝင်တာကိုဆိုလိုပါတယ်။ တခုခုလုပ်လို့ ကိုယ်လဲဝင်ပါမယ်ဆိုရင် “ Buy me in “ လို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။ ဒီအသုံးကို ဒီမိုကရက်တွေကြီးစိုးနေတဲ့လက်ရှိ အမေရိကန်အောက်လွှတ်တော်မှာ အမတ်အများစုက သမတ Donald Trump ကို အရေးယူဖို့ကြိုးပမ်းလိုကြပေမဲ့ အောက်လွှတ်တော် ဥက္ကဌ Nancy Pelosi က ဒါကိုဘဲမဲပြီးလုပ်ရင်တခြားဦးစားပေးလုပ်ရမဲ့အချက်တွေအပေါ်မျက်ချေပြတ်သွားနိုင်တဲ့အပြင် Democrat အမတ်တွေနဲ့ Grand Old Party (GOP) လို့အတိုကောက်ခေါ်တဲ့ Republican အမတ်တွေကြားလဲစိတ်ဝမ်းကွဲစေမှာကိုစိုးရိမ်သလို တချိန်ထဲမှာဘဲ သက်သေအထောက်အထားမခိုင်လုံဘဲလုပ်ရင် Republicans တွေကလက်ခံမှာမဟုတ်ြကတဲ့အတွက် အချိန်ကုန်ရုံဖြစ်လိမ့်လို့ အောက်လွှတ်တော်ဥက္ကဌ Pelosi ကပြောခဲ့တဲ့အတွက် The Hill သတင်းစာကြီးက“Pelosi on Trump impeachment: You're wasting your time without GOP buy-in” ဆိုတဲ့ ခေါင်းကြီးနဲ့ ရေးသားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
The committee members did not “buy in” to Bill’s proposal, so he was very disappointed.
ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်တွေက Bill ရဲ့ အဆိုပြုချက်ကိုလက်မခံကြဘူး၊ ဒါ့ကြောင့်သူလည်းသိပ်ကိုစိတ်ပျက်သွားတယ်။
(၂) Mum’s the Word
Mum (ကဒီနေရာမှာနှုတ်ခမ်းကိုစေ့ပြီး အသံထွက်ဖို့ ကြိုးစားကြည့်ရင် Mmmmm ဆိုပြီးထွက်တဲ့အသံကိုရည်ညွှန်းတာဖြစ်ပြီး)၊ Mum’s က Mum is ကို ချုံ့ ရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ The word (စကားလုံး) ဖြစ်ပြီး၊ စကားစုတခုလုံးရဲ့  တိုက်ရိုက်အဓိပ္ပါယ်က စကားလုံးကနှုတ်ပိတ်ထားဖို့ဆိုလိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။ Mum’s the word ရဲ့ အီဒီယံအဓိပ္ပါယ်က ပါးစပ်ကဘာမှအသံမထွက်ဖို့၊ နှုတ်ဆိတ်နေဖို့ကို ဆိုလိုပါတယ်။ ဒီအသုံးကို ၂၀၁၆ အမေရိကန်သမတရွေးကောက်ပွဲမှာ ရုရှားရဲ့ကြားဝင်စွက်ဖက်မှုရှိ ၊ မရှိ အပြင်သမ္မတ Donald Trump နဲ့ ရုရှားကြား ပူးပေါင်းကြံစည်မှုရှိ ၊ မရှိ ကို ၂နှစ်နီးပါးကြာစုံစမ်းမှုကို ဦးဆောင်ခဲ့တဲ့ဥပဒေအထူးအကြံပေး Robert Mueller ရဲ့အစီရင်ခံစာကို ပြီးခဲ့တဲ့ သောကြာနေ့က ရှေ့နေချုပ် William Barr ထံကိုပေးပို့ခဲ့ရာမှာအမေရိကန်လွှတ်တော်နဲ့ပြည်သူတွေကို အစီရင်မခံမီ၊ ဘာမှဒီအကြောင်းစောစောပိုင်းက ထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်းမရှိတဲ့အတွက် The Washington Post သတင်းစာကြီးက “For now, mum’s still the word on Mueller’s Report “ ခုချိန်မှာတော့ Muellerရဲ့အစီရင်ခံစာနဲ့ပတ်သက်လို့ နှုတ်ဆိတ်နေဆဲရှိတယ်ဆိုတဲ့ခေါင်းကြီးနဲ့ရေးသားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
Mum’s the word on John’s surprise birthday party!
John ရဲ့  မွေးနေ့ပါတီကို သူ့အတွက် အံ့အားသင့်အောင် လုပ်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် အဲဒီအကြောင်းဘာသံမှမထွက်ကြနဲ့ ။
(၃) To takealeaf from someone’s book
To takealeaf (စာရွက်တရွက်ကိုယူတာ)၊ from someone’s book (တဦးတယောက်ရဲ့ စာအုပ်ကနေ)ဖြစ်ပြီး စကားစုတခုလုံးရဲ့  တိုက်ရိုက်အဓိပ္ပါယ်က လူတဦးတယောက်ရဲ့စာအုပ်ထဲကစာရွက်တရွက်ကိုယူတာ ဖြစ်ပါတယ်။ To takealeaf from someone’s book အစား To takealeaf out of someone’s book လို့လဲသုံးလို့ရပါတယ်။ လူတဦးရဲ့စာအုပ်ထဲကစာရွက်တရွက်ယူတယ်ဆိုတာက၊ သူများရေးထားတဲ့စာကိုကူးချဖို့ဆိုတဲ့မူရင်းအဓိပ္ပါယ်ရှိ ခဲ့ပေမဲ့၊ ခုနောက်ပိုင်းမှာ ဒီအသုံးရဲ့  အီဒီယံအဓိပ္ပါယ်က လူတဦးလုပ်တာကိုအားကျလို့လိုက်အတုယူတာကိုဆိုလိုပါတယ်။ တနည်း သူလုပ်သလိုလိုက်လုပ်ရင်ကိုယ်လဲသူ့လိုဘဲအောင်မြင်နိုင်မလားဆိုတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအသုံးကို EU ဥရောပသမ၈္ဂကနေ နှုတ်ထွက်ဖို့ အတော်လေးရုန်းကန်နေရတဲ့ ဗြိတိန် ၀န်ကြီးးချုပ် Therersa May ဟာကမ္ဘာ့တခြားဘက်ခြမ်းရှိ New Zealand မှာ မကြာသေးမီက ဗလီ ၂ ခုပစ်ခတ်မှု မှာ သေနတ်ထိန်းချုပ်ရေးကိုရက်တိုတိုအတွင်းကိုင်တွယ်လိုက်တဲ့ ၀န်ကြီးချုပ် Jacinda Ardern ကို ချီးကျူး ပြီး ၊ Theresa May ဟာ Jacinda Ardern ကို အတုယူသင့်တယ်လို့ The Irish Times သတင်းစာကြီးက “Theresa May could takealeaf from Jacinda Ardern’s book” ဆိုတဲ့ခေါင်းကြီးနဲ့ရေးသားခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
John decided to takealeaf from his brother’s book by joining the army.
John က သူ့ အစ်ကိုလုပ်သလိုလိုက်ပြီးအတုယူတဲ့အနေနဲ့စစ်ထဲဝင်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။